Madaxweyne Farmaajo oo maanta furaya kalfadhigii 3-aad ee Baarlamaanka Soomaaliya – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/llahi Farmaajo ayaa maanta furaya kalfadhiga 3-aad ee Baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka kooban Aqalka sare iyo Golaha Shacabka.
Qaban qaabo ku aadan qabsoomidda munaasabadda furitaanka kalfadhiga 3-aad ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa haatan ka socota dugsiga tababarka Booliska Janaraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho.
Guddi ka kooban labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya oo loo xil saaray qabanqaabada munaasabadda furitaanka ayaa maalmahanba waday qaban qaabo ku aadan qabsoomidda munaasabdaasi oo lagu wado in maanta ay dhacdo.
Ajandayaasha horyaala Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah ansixinta sharciyada muhiimka ah,sida dib u eegista Dastuurka, sharciyada la xiriira doorashada iyo hindise sharciyeedyo kale oo xukuumaddu ay horgeysay Baarlamaanka Soomaaliya.
Munaasabadda waxaa ka qeybgalaya madaxda sare ee Dowladda Soomaaliya,maamul Goboleedyada iyo Wakiilada Beesha Caalamka u fadhiya Soomaaliya.